Gabriel García Márquez: biography, zvirevo uye mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Gabriel García Márquez: biography, zvirevo uye mabhuku
Alberto Makumbo | | Vanyori, Mabhuku, Literature
Vamwe vanyori vane kugona kurova chord nemuverengi nechirevo chimwe chete. Kuti vamutse shavishavi mapofu mumoyo uye vanyatsovatakura kuenda kune imwe nzvimbo, kune yavo nyaya uye mavara. Mumwe weavo vanyori ndiGabriel García Márquez, mwanakomana weruzivo rweColombia akaratidzirwa nemashiripiti echokwadi uye mabasa ayo atove chikamu chenhoroondo yemabhuku nekusingaperi. Joinha isu parwendo urwu kuburikidza ne zvirevo, biography uye mabhuku aGabriel García Márquez.
1 Gabriel García Márquez: kubva kuMacondo kuenda pasirese
2 Mabhuku akanakisa naGabriel García Márquez
2.1 Makore zana okusurukirwa
2.2 Rudo Munguva YeKirarera
2.3 Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa
2.4 Colonel haana wekumunyorera
2.5 Mumatsutso a Patriarch
2.6 Ndangariro dzehure dzangu dzinosuruvarisa
Gabriel García Márquez: kubva kuMacondo kuenda pasirese
Mufananidzo: Alberto Piernas
Rudo nderwekusingaperi apo runogara.
Ndakangouya kuzotaura pafoni
Mwedzi mishoma yapfuura ndakave nemukana wekushanya Aracataca, dhorobha rakarasika pakati pemiti yemabhanana nemakomo eColombia muCaribbean makazvarwa Gabriel García Márquez munaKurume 6, 1927. Nzvimbo iri kure umo imba yega yega, gomba kana ndangariro zvinotenderera Mubayiro weNobel muMabhuku: imba yemhuri yekare yakashandurwa nhasi kuita mamuseum yakavezwa nemitsara uye fenicha yeaseti, mapururufuru epapepa anobata mimwe miti kana akadhirowewa emumaguta masampuli anomiririra mutambi wenhau wakanakisa uyo dhorobha iri (neColombia) rakapa pasi rose.
Yaiva mutaundi rimwe chete iri Gabo paakatanga kuteerera nyaya dzaambuya vake, mukadzi anofungidzira uye anotenda mashura, aigona kukurudzira basa rake raaizotevera. Zvakare nzvimbo senge yakakurumbira teregirafu yeAracataca kwaishandira baba vake vasati varoora amai vake mushure merungano rwerudo rwekutanga rwakadzivirirwa nevabereki vake.
Muviri wemunhu hauna kugadzirirwa makore anorarama munhu.
Rudo uye Mamwe Madhimoni
Mushure mehucheche hwakaratidzirwa nehunhu hwake semukomana anonyara uyo akanyora nhetembo dzinosetsa mukona yechikoro chebhodhingi muBarranquilla, Gabo akatanga kudzidza zvemutemo muBogotá, achipedza kudzidza muna 1947. Kunyangwe aive akadzidza zvidzidzo izvi kuti afadze baba vake, munyori weRamangwana. akafunga kuramba basa segweta uye kutarisisa kutapa nhau, chimwe chinhu chaakatanga kusanganisa nekunyora kwaro nyaya dzakafemerwa nemabasa akadai seThe Metamorphosis, naFranz Kafka, Chiuru uye Rimwe Usiku kana dzimwe nyaya dzambuya vake izvo zvakaburitsa zviitiko zvinonakidza zvakaiswa mune yakajairwa, yepasirese nyika.
Gabriel García Márquez akasangana nerudo rukuru rwehupenyu hwake, Mercedes barcha, panguva yeimwe yezhizha yehucheche hwake, achiva shamwari yake huru uye chivimbo. Naizvozvo, mushure mekuzvarwa kwemwanakomana wavo Rodrigo muna 1959, mhuri yakatamira kuMexico City mushure mekutyisidzirwa kwakagamuchirwa nevapikisi vakasiyana veCuba nenhengo dzeCIA maererano nemishumo yakaitirwa bepanhau rePrensa Latina kubva kuNew York.
Munyori akanaka anogona kuwana mari yakanaka. Kunyanya kana iwe ukashanda nehurumende.
Rarama kuti utaure
Akaiswa mumuzinda weMexico, Gabo nemhuri yake vakatarisana neimwe yemamiriro avo akaipisisa ezvehupfumi, vachitungamirwa nekugadzirwa kwenoveta inonzi Makore zana okusurukirwa izvo zvakapfuura nezviuru zvimhingamupinyi vasati vasvika kuimba yekutsikisa yeSudamericana, kuArgentina, muna 1967. Havana kumbofungidzira kuti basa racho raizopedzisira rave chinhu chekutengesa uye nemotokari yakakwana yechisiko chayo pachayo mune iyo nyaya dzese inomiririra kondinendi yose.
Kuenderana neuyo anozivikanwa sa «Latin America boom«, Iro basa raGabo rakatanga kuwana nzvimbo dzakakwirira, kuva mumwe wevanyori vakuru vezera rake uye, pakupedzisira, enziyo muSpanish.
Mabhuku akanakisa naGabriel García Márquez
Makore zana okusurukirwa
Zvinhu zvine hupenyu hwazvo, zvese inyaya yekumutsa mweya.
Inofungidzirwa seimwe ye mabhuku akanakisa, Basa guru raGabo rakava budiriro isingatarisirwi mushure mekuburitswa kwayo muna 1967, zvichienderana nekukwira pakuita zvemashiripiti kwakatosimbiswa nevamwe vanyori vakaita saMexico Juan Rulfo. Gara mutaundi rekunyepedzera re Macondo (chaizvo Aracataca), iyo nyaya inorondedzera shanduko yemhuri yeBuendía sedimikira rakakwana rekondinendi yemashiripiti umo mashura, kutonga kweAmerica kana kurasikirwa kwehunhu hunoumba nyaya yakasarudzika yakakomberedza mavara akaita sa Úrsula Iguarán, matriarch kubva mhuri yakafemerwa naambuya vaGabo.
Ungada here kuverenga Makore zana okusurukirwa?
Rudo Munguva YeKirarera
Izvo zvaive zvisingadzivisike: kunhuhwira kwemaarumondi anovava kwaigara kuchimuyeuchidza nezveramangwana rerudo rwunopesana.
Gabo aigara achitaura nezvake kuti raive "bhuku raanofarira", pamwe nekuda kwechinhu chisina kunaka chakaburitswa kubva nyaya yerudo yevabereki vake chaiye pane iro bhuku rino rakaburitswa muna 1985 rakafemerwa.Set in a city in the Colombian Caribbean (can be the famous Cartagena deIndias izvo zvakafemera munyori zvakanyanya), Rudo Munguva YeKirarera anorondedzera kudanana kwaFlorentino Ariza naFermina Daza, vakaroora chiremba Juvenal Urbino kwemakore makumi mashanu nerimwe, mwedzi mipfumbamwe nemazuva mana.
Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa
Zviroto zvese neshiri zvine hutano hwakanaka.
Kunyangwe hazvo Gabo angasimukira mukurumbira semunyori wenhema, hatifanire kufuratira basa rakaoma reNobel Prize semutori wenhau Iri basa rakanaka rinozadza mabhuku senge rino, tense uye tambo yekuyedza yakanangana nehumhondi chaihwo hwakaitika muna 1951 iyo, yakaendeswa kungano, inova kuvakwazve kwerufu rweSantiago Nasar pamaoko eumwe wevagari veguta rinoziva nezve kubata kwemhosva. Iri bhuku rakaburitswa muna 1981 richiita rimwe remabhuku anozivikanwa zvikuru aGabriel García Márquez.
Lee Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa.
Colonel haana wekumunyorera
Hazvina kunonoka kune chero chinhu.
Basa repiri rakanyorwa naGabriel García Márquez ibhuku pfupi, kunyangwe riine hurefu hupfupi, rine chikonzero chakasimba sekushayikwa kwemwanakomana akaremerwa nevabereki vake, kunyanya naColonel uyo asingatombogamuchira mudyandigere akamirira mabasa ake panguva Zviuru zveZuva Hondo. Zvakakosha.
Tsvaga nhoroondo ye Colonel haana wekumunyorera.
Mumatsutso a Patriarch
Tainyatsoziva kuti zvainetsa uye nekupupura asi pakanga pasina imwe, General.
Hukama hwepedyo pakati paGabriel García Márquez nemutungamiri weCuba Fidel Castro yaigara ichikakavadzana. Muchokwadi, ivo vanotaura kuti mudzvanyiriri aisada inovhita zvakanyanya, umo Gabo akarondedzera hupenyu hwemutungamiriri weLatin America kuburikidza nemaonero akasiyana. Mumatsutso a Patriarch Yakaburitswa muna 1971, kutanga makore gumi umo nyika dzakaita seCuba dzakanyudzwa muhudzvanyiriri uye vamwe vakaita seDominican Republic vachiri kupora kubva pajoko raTrujillo.
Ndangariro dzehure dzangu dzinosuruvarisa
Chiratidzo chekutanga chekweguru ndechekuti unotanga kuita sababa vako.
Iyo gakava rakadzokera kuna Gabo nerino nyowani inotaura nezve kutorwa kweumwe murume mukuru anowana rudo kekutanga kuburikidza nemhandara achiri kuyaruka. Mutambo, kuvhota muIran uye kushurikidzwa nemaNGOs akasiyana muMexico, Akava wekupedzisira kuburitswa nemunyori asati afa muna Kubvumbi 17, 2014 nekuda kwekenza yeremphatic yakanga yadhonzera kwemakore akati wandei
Iwe hausati waverenga Ndangariro dzehure dzangu dzinosuruvarisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Gabriel García Márquez: biography, zvirevo uye mabhuku
Isabel Allende: Biography uye akanakisa mabhuku
Musha wemicheka uye 7-7-2007. Dzazvino kuverenga mu pink uye nhema